Imoto Mat Factory, abahlinzeki - China Imoto Mat Abakhiqizi
Ikhwalithi ephezulu ye-Non Skid Design TPE Car Foot Mat
I-TPE imoto amacansi ezinyawo anenzuzo yokungangeni manzi, amelana nezingubo futhi ahlanzeka kalula.
Izinto zokwenziwa zesikhumba se-PVC Sponged Car Mats
Omata bezimoto zikaBensen kulula ukuba bahlanzwe futhi banakekelwe kahle, futhi amabala amancane angasulwa ahlanzwe ngethawula lephepha elimanzi.
Umugqa we-Diamond Foam Roll ongangenwa ngamanzi we-Car Floor Mats
Isici esibaluleke kunazo zonke kumata wonyawo lwesikhumba se-PVC ukubeka emotweni indawo ephezulu, futhi engabizi kakhulu, engenamthungo ngeke iqoqe uthuli, okulula ukuluhlanza, kepha futhi akulula ukuslayida, ukuphepha okuphezulu.
Okokuthengisa Okushisayo Kwe-PVC Isikhumba Sama-Auto Mats
Omata bezinyawo zesikhumba bezimoto banezici zokuvikela uthuli, ezingashibilikisi nezimelana nokugqoka. Ukusetshenziselwa ukuhlobisa imoto kuzokwenza imoto yakho ibe yinhle kakhulu.
Omata bakasilika bekhoyili banganciphisa ukukhathala konyawo futhi bakhuphule injabulo yokushayela. Omata bonyawo kasilika banobunono, amandla athwala isisindo, futhi akukho ukuguquguquka uma ukhanywa.
Okuhle kwe-Quanlity 3D Car Foot Mats Izinto ze-Car Interiors
Omata bezinyawo zemoto abakhiqizwa yiBensen banobungani emvelweni, banethezekile, bayaphefumula futhi abashelelezi. Ungahlinzeka ngemodeli yokuthenga umkhiqizo ophelile noma ukuthenga izinto zokusetshenziswa ukuze uzenzele ngokuthanda kwakho. Omata bezimoto zikaBensen benziwa ukunciphisa izingozi ezifihliwe ezibangelwa amacansi ezimoto.